I-ANC eN West ikhiphe umyalelo oqinile kumalungu ayo ePhalamende | News24
I-ANC eN West ikhiphe umyalelo oqinile kumalungu ayo ePhalamende
Mahikeng - Iqembu i-African National Congress eNorth West, seliyalele amalungu alo angu-13 amele lesi sifundazwe ePhalamende ukuba uma sekuvotwa aphikisane nesiphakamiso sokungethenjwa kobuholi bukaMengameli Jacob Zuma.
Isiphakamiso kulindeleke sibekwe ezithebeni zePhalamende ngo-Ephreli 18.
UNobhala we-ANC esifundazweni, uDakota Legoete, uthi baphinde bayalela amalungu abo ePhalamende ukuba aqinisekise ukuthi awasebenzisani namaqembu aphikisayo ePhalamende.
“Sisibeke kwacaca isinqumo okwaphunywa naso emhlanganweni we-National Working Committee sokuba njenge-ANC kumele siphikisane nesiphakamiso sokugudluza uMengameli Jacob Zuma owakhethwa ngokomthetho, nokuthi akekho noyedwa okumele avote ngokulandela unembeza wakhe.
OLUNYE UDABA: Kushone 4 wabantu kugingqika imoto
“Bonke kuzomele bavote ngokuhambisana nokufunwa yiqembu ukuqinisekisa ukuthi uMengameli Jacob Zuma uyaqhubeka nokuba ngumengameli wezwe.”
IDemocratic Alliance, Economic Freedom Fighters ne-United Democratic Movement, bafaka isicelo sokuba kudingidwe ngokungethenjwa kobuholi bukaMengameli Zuma kulandela isinqumo sakhe sokwenza izinguquko kwiKhabhinethi, okubalwa kusona nokuxosha uPravin Gordhan.